Xasan Sheekh oo ka digay muddo korsi lagu sababeeyo duruufo aan doorasho lagu qaban karin - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Xasan Sheekh oo ka digay muddo korsi lagu sababeeyo duruufo aan doorasho lagu qaban karin
December 5, 2019 Duceysane333
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal ka soo saaray doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan iyo hadal heynta ku aadan in muddo kororsi loo sameeyo hey’adaha dastuuriga qaarkood.
Qoraal dheer oo bartiisa Facebook ku soo daabacay ayuu kaga hadlay taariikhda doorashooyinka Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1964 illaa 2016, isagoo ka digay inay dhacaan muddo kororosi la doonayo in lagu sababeeyo duruufo aanay doorasho lagu qaban karin.
Halkan hoose ka akhriso Qoraalka Xasan Sheekh :-
Iyadoo baryahaan Golaha Shacaba ee baarlammaanka ka doodayo xeerka doorashada JFS, in siyaasiyiinta qaarkood iyo dad sheegta iney qubaro yihin ay ku doodayaan ifinta Waddo suurtagalineyso in la sammeeyo KORORSIIMMO xilliga hay’adaha dastuuriga qaarkood iyadoo lagu sababeynayo haddii ay dhacaan duruufo aan doorasho laga qaban karin.
Lix bilood ayaa doorashada dib loo dhigayaa haddii ay dhacaan duruufahaas – kuwaas oo aan la garaneyn waxa ay yihiin. Haddii lix bilood looga bixi waayana, baarlammaanku waa joogayaa ee madaxda ayaa la dooranayaa. Baarlammanku wuxuu joogayaa markaas ilaa xilli aan la garaneyn isna.
Dagaal u dhaxeeya labo maleeshiyo beeleed oo ka qarxay deegaano ka tirsan Mudug